Lake Temagami Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Ontario, i-Canada | Airbnb
Ukuqasha kokuvakasha e-Lake Temagami
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Lake Temagami
I-Bernie 's Island on Beautiful Lake Temagami
I-Bernies Island Isiqhingi esihle esingu-3.5 acre eningizimu-ntshonalanga yeLake Temagami. Isiqhingi sinendlwana eyinhloko enamakamelo okulala angu-2 enobhavu ongu-3wagen, kanye nefoni enamakamelo okulala amabili aseduze nezingane nomndeni. Ehlelwe kahle emanzini, indlwana enkulu inendawo enhle ehloliwe kuvulande enokubukeka okuhlaba umxhwele kwechibi nelanga. Futhi ama-kayak, izikebhe, namathoyizi amanzi ezingane, ama-raft, nemizila yemvelo. • Isikebhe esiyinhloko esingu-18 'se-Stanley esinezimoto @ $ 700/ngesonto.
Amasevisi athandwayo ase- Lake Temagami ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Lake Temagami